ပွငျသစျထဲတွင်ကြေးဇူးတငျ - သနားခြင်းကရုဏာ et က Les Autres Remerciements
ပွငျသစျထဲတွင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဖို့ကိုဘယ်လို: မသနားတျောမူ et က Les Autres Remerciements
သင်တို့ရှိသမျှသည် "ကရုဏာ" ငါသိ၏။ သို့သော်ပြင်သစ်၌သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပြောကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအဖြစ်ဟူသောစကားလုံးမှကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။
"ကရုဏာ" '' ကျေးဇူးတင်ပါတယ် '' ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ '' ay '' တစ်ဦးတံခါးပိတ် '' ur '' သံမမြည်မြည်ကာပွင့်လင်းနှင့်အတူ "mair တွေ့မြင်" အသံထှကျ။
သငျသညျ "ကရုဏာ beaucoup" ဟုကပိုမိုအားကောင်းစေနိုင်သည် - '' အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် '' ။ အလွန်ပါဝင်သည်, သငျသညျ "ကရုဏာtrès beaucoup" ဟုမဆိုနိုင်သောသတိပြုပါ။
ပြော '' တစျထောငျကျေးဇူးတင်စကား '' ကြှနျုပျတို့သညျ "ကြည့်ရှုသူတစ်ထောင်သနားတျောမူပါ" ဟုပြောသို့မဟုတ် "သနားခြင်းကရုဏာကြည့်ရှုသူတစ်ထောင် fois" ။ ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်သကဲ့သို့ဒါဟာပွငျသစျထဲတွင်တော်တော်ဘုံပါပဲ။
သငျသညျအများအားဖြင့်တစ်ဦးအပြုံးနှင့်အတူအသံ "ကရုဏာ" အတူလိုက်ပါနှင့်သင်ဖို့ကမ်းလှမ်းခံရသမျှကိုလက်ခံသည်ဟုဆိုလို။ သငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုငြင်းဆန်ချင်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သင်သည် "မဟုတ်တဲ့သနားတျောမူပါ" ဟုပြောနိုင်ကြောင်း, သို့မဟုတ်တောင်မှပဲရပ်တန့်လက်ဟန်ခြေဟန်တစျမြိုး၌သငျ၏ရှေ့မှောက်၌လူတစ်ဦးရန်သင့်သည်စွန်ပလွံဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးလက်ဟန်အမူအရာနှင့်အတူ "ကရုဏာ" ဟုဆိုသည်။ သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာ "no" ဆိုတဲ့သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းလှုပ်စေ။ သင်ငြင်းဆန်ဖြစ်ချင်တယ်ဘယ်လိုကုမ္ပဏီတစ်ခုကပေါ် မူတည်. ပြုံးသို့မဟုတ်မည်မဟုတ်ပါ။
သငျသညျတစ်စုံတစ်ဦးကကျေးဇူးတင်တဲ့အခါသူတို့က "ကရုဏာà toi / A vous" ပြန်ပြောရမည်အကြောင်းအ - အင်္ဂလိပ်, သင်သည် "ငါသည်သင်တို့ကိုကြေးဇူးတငျတဖြစ်ကြောင်းကို" အဓိပ်ပာယျ, အသငျသညျအပျေါအလေးထားအတူ "သင်ကျေးဇူးတင်" လို့ပြောချင်ပါတယ်။
je vous / သဲ Remercie လောင်း ... ငါပြင်သစ်သည်ကိုသင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
'' ကျေးဇူးတင်ပါတယ် '' ဟုပြောရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းကြိယာ "ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည် remercier " ။ "Remercier", 'ကျေးဇူးတင်ပါတယ်' (ဒါကြောင့် Les, vous, ငါ့ကို, te, le, la, nous သည့်နာမ်စားကိုယူပါလိမ့်မယ်) တိုက်ရိုက်အရာဝတ္ထုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, ပြီးတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်နည်းတူ, 'အတွက်' 'သွန်းလောင်း "ဖြစ်ပါတယ် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်။
"ဂျေ vous / te remercie ce délicieux Diners လောင်း" ။ ငါသည်ဤအရသာညစာစားသောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကြိယာ "remercier" "ကိုယ့်" ၌တစ်ဦးကို stem ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသံကိုမကြာခဏဆိုသလိုပဲကြိယာ "étudier" ကဲ့သို့တစ်သရသံပါလိမ့်မည်သတိပြုပါ။
"ဂျေ vous / te remercie Les Fleur လောင်း" - ငါပန်းပွင့်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
"ဂျေ vous / te remercier voulais votre / ta gentillesse လောင်း" - ငါသည်သင်တို့၏ကြင်နာမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်တယ်။
"remercier" အသုံးပြုခြင်း, ပြင်သစ်အတွက်အများကြီးလျော့နည်းဘုံ "ကရုဏာ" ကိုအသုံးပြုခြင်းထက်အလွန်တရားဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပွငျသစျထဲတွင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြပိုနည်းလမ်းတွေအတွက်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
က Les Remerciements - အကျေးဇူးတင်ပါသည်
အဆိုပါကျေးဇူးတင်စကားအကြောင်းပြောနေတာတဲ့အခါမှာသင်နာမ် "le / Les remerciement (s)" ကိုသုံးပါချင်ပါတယ်, နာမ်, အများအားဖြင့်အများကိန်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
"Les remerciements က de ဆူအဖြစ် Tu" - သငျသညျဆူရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားရှိသည်။
"ဂျေ voudrais lui adresser mes remerciements" - ငါသူ့ကို / သူမ၏ငါ၏အကျေးဇူးတင်စကားပေးပို့ချင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတုံ့ပြန် မှာအားလုံးပြင်သစ်အားလပ်ရက်မရှိ, အရှိဆုံးပြင်သစ်ကလူသည်ကြားလျှင်ဖူးဘူး။ သူတို့ကတီဗီပေါ်မှာဟာသဇာတ်လမ်းအပေါ်အချို့သောကျေးဇူးတုံ့ပြန်ညစာမြင်ကြပေမယ့်ဖြစ်နိုင်အင်ဖိုစွန့်ပစ်ခဲ့ကြပေမည်။ တစ်ခုခုကိုပြင်သစ်တွင်အဘယ်သူမျှမက Black သောကြာနေ့ရောင်းချရှိပါသည်။
ကနေဒါမှာတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တစ်ဦးက S နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ "l'လှုပ်ရှားမှုက de Grace (s) ကို" ဟုခေါ်၏, US မှာကဲ့သို့တူညီသောဖက်ရှင်အတွက်တော်တော်များများကျင်းပဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အောက်တိုဘာလ၏ဒုတိယတနင်္လာနေ့။
ဒါဟာ "Une လှည်းက de remerciement" ရေးသားဖို့ပြင်သစ်တွင်အတန်ငယ်လျော့နည်းဘုံပါပဲ။ ကျွန်မဆိုလို, ကအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး, ထိုသို့အလွန်ယဉ်ကျေးရဲ့, ဒါပေမယ့်ကတ်များကြီးမားတဲ့စျေးကွက်များမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်မှာ Anglo-Saxon နိုင်ငံများတွင်တူသောမဟုတ်ပါဘူး။ သင်အမှန်တကယ်အထူးတစ်ခုခုမှကုသခဲ့ပါတယ်လျှင်, သင်လုံးဝတစ်ဦးကျေးဇူးသင်သည်ကဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ရေးမှတ်စုပေးပို့နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ပြင်သစ်မိတျဆှေသေချာပေါက်အပြန်အလှန်ရန်မျှော်လင့်ထားပါဘူး။
"Tomber" (Fall ဖို့) အတွက်ရိုးရှင်းသော conjugation Learn
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ - ဂျပန်ဝေါဟာရ
ပြင်သစ် accents Homographs
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: ဒေါက်ဂလပ် SBD Dauntless
တစ်ဦးကမ္ဘာ့ဖလားမြေပုံပေါ်လတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ်၏ဗိုလ်မှူး Lines ရှာဖွေတွေ့ရှိ
Prometheus: မီးသတ် Bringer နှင့် Philanthropist
ပွင့်လင်းက de Espana (စပိန်ပွင့်လင်း) ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
စန်တာဘာဘရာမှာကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ် (UCSB) အဆင့်လက်ခံရေး
အဆိုပါစစ်ပွဲကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ။ ။ အထဲကလာကြ ကျေးဇူးပြု.
Mormonism သညျယရှေုကိုဧပြီလ6ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်ယုံ
ပုံစကိတ်စီးခြင်းသည်ရေခဲပြင်စကိတ်စီးဝယ်ရန်နှင့် Choose လုပ်နည်း
Jay-Z / R ကို။ ကယ်လီ: နှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံး
"တစ်ဦးအရောင်းစာရေး၏မရဏ": ဝီလီ Loman အဘယ်အရာကိုရောင်းပါသလား?
1812 ၏စစ်ပွဲ: Chippawa ၏တိုက်ပွဲ
အဆိုပါ ACT အဘို့ကိုလေ့လာဖို့ကိုဘယ်လို
Guru Arjun Dev မှ (1563 - 1606)